Vose vachiri kufona pa0717 215 871 cheregai henyu nekuti ndakamuwana . . . | Kwayedza
Vose vachiri kufona pa0717 215 871 cheregai henyu nekuti ndakamuwana . . .
10 Dec, 2015 - 17:12	 2015-12-18T00:06:43+00:00 2015-12-10T17:26:09+00:00 0 Views
NDINOKUTENDAI zvikuru veKwayedza nekugona basa. Ndakawana musikana wangu wandinoda saka vese vachiri kufona pa0777 141 412 chiregai henyu.
Ndanzwa nekunyorera asi hapana kana shambadzo yangu iri kumboburitswawo. Ndiri murume ane makore 43 nevana 2. Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuvaka naye musha ane makore 35 zvichidzika. Andifarira anondibata pa0772 514 978.
Ndiri murume ane makore 38, HlV positive uye ndinodawo mukadzi anoda zvemba kubva pamakore 28 kusvika 36. Anondida anoshandisa masms pa0774 100 369.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvakawo shamwari (penpals) yekupangana nayo mazano. Nhare yangu 0717 719 072.
Ndiri mukadzi ane makore 42 nevana 2 ndinodawo murume ane makore 48 kusvika 70. Vanoda ndibatei pa0717 811 305.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, HIV negative uye ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 24 zvichidzika. Zvakawanda tinozotaura, anenge andifarira anondifonera kana kutumira sms pa0773 945 977.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo mudzimai wekushamwaridzana naye ane makore 27, ndinoda ari muHarare. Nhare yangu 0773 714 216.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana mumwe, ndinotsvagawo murume ane makore 30-35 ane mwana 1 kana 2. Ngaave anoshanda, anogeza, asingapute fodya uye anotya Mwari. Ndinoda ari muHarare, ini ndinoshanda. Anoda nezvangu ngaandibate pa0736 839 637.
Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 2, HIV negative uye ndinotsvagawo murume ane makore 32 kusvika 35 anoda zvekuroora. Nhare yangu 0735 098 280.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndiri muHarare uye ndinoshanda. Ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 25 anoshanda kana asingashandi. Asina chirwere ngaandibate pa0777 532 546.
Makadini? Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mudzimai akatendeka wekuroora anotya Mwari, asina utachiona hweHIV. Anondida ngaandibate pa0737 201 563.
Ndinotsvaga murume ane makore 45 kusvika 48 anoda zvokundiroora nekuvaka musha. Ndine makore 40 nevana vana. Anoda ngaandibate pa0771 119 229.
Ndiri mudzimai ane makore 51, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari positive anoda Mwari. Ndakambonyorera asi shambadzo yangu haina kuburitswa. Ngaave asinganwe hwahwa, nhare yangu 0772 936 585.
Ndiri kutsvagawo murume anoda kundiroora. Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana vaviri. Ndinodawo ane makore 40 kusvika 45. Anondida ngaandibate pa0776 161 513.
Vose vachiri kufona pa0717 215 871 cheregai henyu nekuti ndakamuwana wandaida. Makaita basa veKwayedza.
Ndodawo mudzimai ane makore 30 zvichienda mberi ari HIV negative. Ini ndiri kuMasvingo uye ngaave anogona kutsvagawo mari. Nhare yangu 0777 990 559.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino ndikashaya wandaida. Ndiri mukadzi ane makore 43 ekuberekwa nevana vaviri. Ndotsvagawo murume ari pachokwadi anoziva Mwari uye ane zvaanoita muhupenyu. Ari HIV positive achigara muHarare ngaandibate pa0774 985 632.
Ndiri murume ane makore 36, HIV positive uye ndinodawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 25 kusvika 35 ari HIV positive seni. Ndibatei pa0777 477 545.
Makadii vanhu vaMwari? Ini ndiri mudzimai ane makore 27 nemwanakomana mumwe. Ndinodawo murume ane makore 30 kusvika 45 ari pachokwadi ane vana vake asi varume vevanhu musafona henyu nevanotamba. Handidi madzibaba asi anonamata, kunyangwe anonwa doro asina hasha, aine rudo. Nhare yangu 0779 009 431.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vatatu ndinotsvaga murume ane vana vake anoda zvemba anoshanda asiri pamushonga. Ngaave ari pachokwadi ane makore 44-50. Anenge andifarira ngaandibate pa0777 560 932 asi vane madzimai kwete.
Ndiri murume ane makore 40 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 30 – 40 wekuroora. Ndine mwana mumwe, nhare yangu 0737 918 519.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 27 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 29 kusvika 35. Nhare yangu 0733 627 132.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21, HIV negative uye ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23 ane rudo. Andifarira ngaandibate pa0737 460 707.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana mumwe chete. Ndiri kutsvagawo murume wekumisa musha naye kubva kumativi mana ese enyika ane makore 28 kusvika 45. Anoda ngaandibate pa0779 069 427.
Tapindawo muchirongwa, ndiri mukomana ane makore 35 ndinotsvagawo musikana akapedza Form 4 wekuroora. Ndinosevenza, vanoda ndibatei pa0776 155 698.
Makadini henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 20 akavimbika. Anoda ngaandibate pa0717 770 908.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 — 20 asina asi ngaave ane pasipoti yake. Anoda ngaandibate paWhatsApp pa+27 625 033 924.
Kwaziwai veKwayedza? Ini ndiri kutsvagawo murume wekudanana naye. Handina chirwere ndakazvisimbira zvangu nekudaro ndinodawo asina chirwere, asina mukadzi zvakare. Ndozvishandira, zvizhinji tozotaura taonana. Nhare yangu 0715 292 139, makore 45.
Ini ndiri murume ane makore 36 nevana vaviri, ndinoshanda uye ndiri HIV negative. Ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 25-33 anoda zveimba chero ainewo vana vake. Vanoda fonai pa0776 488 903.
Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 -25. Ndine makore 32, nhare yangu 0775 091 004.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 29 ndinotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 40 anondidawo uye anonamata. Ndiri muHarare, nhare yangu 0775 294 835.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika ari pamushonga akanaka ari shamwari yemvura. Mutsvuku ari pachokwadi uye anovaraidza ngaandibate 0771 818 163.
Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana 4, ndinotsvagawo murume ane makore 40 kana 41. Anoda zvekuroora asingashushe ngaandibate pa0772 602 486.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 39 nevana vatatu ndinoda murume akazvipira ari pachokwadi ane makore 48 kusvika 60. Anoshanda anoda ngaafone pa0733 846 440.
Ndichamuwana asina murume. VeKwayedza ndibatsireiwo, ndiri mukomana ane makore 26 uye ndaneta nekufambira matsotsi asi ndinongoti sango rinopa waneta. Andida ngaandibate pa0779 170 374.
Ndinotenda nechirongwa chenyu veKwayedza, ndakamuwana murume wandaida uye ndinoshuvira zvakanaka. Vose vachiri kufona pa0774 924 382.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana mumwe, ndinodawo murume anoenda kuchechi asinganwe doro kana kuputa fodya. Ngaave anoda kuroora asi varume vevanhu kwete ndapota hangu. Nhare yangu 0784 339 390.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana mumwe nemakore 25 ndinoda murume ane makore 27 kusvika 35 ari pachokwadi. Andida ngaandibate pa0779 056 299.
Ndiri mukadzi ane makore 34, HIV positive uye ndoda murume ari positive anoda wanano asi vanotamba kwete. Nhare yangu 0771 325 024.
Ini ndiri murume ane makore 32 nemwana 1 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 30 ane mwana 1 kana asina. Nhare yangu 0779 675 091.
Ini ndiri mudzimai ane makore 30 nevana vatatu uye ndiri HIV Negative. Ndiri kutsvagawo murume anondiroora ane makore 35 — 40. Anoshanda achinamata ngaandibate pa0779 918 053.